प्रेमिकाले मेरो पेटमा बच्चा छ मेरो अन्तै बिवाह गरिदिन लागे भनेपछि प्रेमिकाको आग्रहमा पुगेका थिए नवराज ! – Aaj ko Sandesh
विश्वमा बिभिन्न धर्मावलम्बीका मानिसहरु छन् । तर सबैभन्दा प्राचीन धर्मका रुपमा वैदिक सत्य सनातन धर्मलाई लिने गरिन्छ । जसलाई हिन्दु धर्म पनि भनिन्छ । हिन्दु धर्ममा केहि यस्ता मान्यताहरु छन् जुन मान्यता विज्ञानसँग जोडिएका छन् । त्यस्कै कारण हिन्दु धर्मलाई वैज्ञानिक धर्म भन्ने गरिन्छ ।
हिन्दु धर्ममा पूजा-पाठ गरेपछि हवन गर्ने गरिन्छ । हवनमा घिउ,कर्पुर, आँपको समिधा, तथा बिभिन्न धुपहरुको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । वैज्ञानिकका अनुसार हवनले वातावरणलाई शुद्ध बनाउँछ । साथै हवन गर्दा हावामा फैलिएका किटाँणुहरु न’ष्ट भएर जान्छन् ।
२ तुलसी पूजा
तुलसीको मठ अधिकांश हिन्दुधर्मावलम्वीहरुको घरमा हुने गर्छ । मठमा विहान-विहान पानी चढाउँने गरिन्छ । तुलसीबाट आयुर्वेदिक औषधी बनाउँने गरिन्छ । तुलसीको पत्ताबाट सानातिना रो’गहरु ठीक हुन्छन् । तुलसीका विरुवाहरुले वातावरणलाई शुद्ध बनाउँने वैज्ञानिकहरुको दा’बी छ ।
३ सूर्य नमस्कार
हिन्दु धर्मका अनुसार विहान उठेर स्नान गरेपछि सूर्यलाई जल चढाएर पूजा गर्दा रोगहरु ना’श हुने विश्वास गरिन्छ । किनभने वैज्ञानिकहरुले विहानको सूर्यको किरण स्वास्थ्यको लागि लाभदायक हुने गरेको बताएका छन् ।
हिन्दु धर्मका अनुसार व्रत (उपवास) बस्नु पहिलेदेखिकै परम्परा हो । वैज्ञानिकहरुले व्रत बस्दा पाचन प्रक्रिया सन्तुलित हुने कुराको ठोकुवा गरेका छन् ।
५ घन्टी तथा शंखको ध्वनी
हिन्दु धर्मावलम्वीहरु पूजा गर्दा शंख तथा घन्टी बजाउँने गर्छन् । तर यसको महत्व ठूलो रहेको वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । वैज्ञानिकहरुका अनुसार मन्दिर तथा पूजा कोठामा शंख-घन्ट बजाउँदा वातावरण पवित्र हुनुका साथै किटाणुहरु टाढा जान्छन् ।एजेन्सी
त्यसैगारी पाथीभरा देवीको उत्पतिसम्बन्धि थुप्रै किम्बदन्ती तथा जनश्रुतिहरू छन । भनिन्छः- परापूर्वकालमा पाथीभरा आसपासका गोठालाहरूले आफ्नो भेडीगोठ पाथीभरामा राखेका थिए । एकदिन अचानक अप्रत्यासित ढंगले देख्दा देख्दै ती गोठका बथानका बथान भेडाहरू अलप भए । त्यस्तो अकल्पनिय घटनाले स्तब्ध तथा हतप्रव भएका गोठालाहरूलाई रातमा देवीले दर्शन दिनु भै आफ्नो उत्पतिस्थल र आकृतिको बोध गराउँदै, भेडा बलिसहित पूजा अर्चना गर्ने निर्देशन दिनुभयो ।
मेलम्चीको सुरुङमा बेपत्ता भएका २ जना अझै भेटिएनन्
यि हुन् ! १३ वर्षका किशोरको मायामा पा’गल भएकी ९ बच्चाकी आमा